Domestic "buhanochkam" futhi UAZ lempi umncintiswano omkhulu kwakufanele edume IsiSwidi Army engibaziyo ngaphansi kwesihloko esithi okunothando "Volvo-Laplander". Igama ithole imoto nesici womhlaba. Lapps - a izizwe elincane abazingeli kanye reindeer abelusi abahlala enyakatho-Europe ku uthi ambalwa. Ezinye northerners ngakho ubizwa nangokuthi abakhileyo zasendle ezisemahlathini zingezami.
Army iloli yakhiqizwa kusukela maphakathi nekhulu le-Athazeksesi, lapho corporation "Volvo" Iyakwazi oda lempi izidingo ibutho isiSwidi. Ukuqala i-prototype Suv Volvo Laplander sangomhla ngonyaka 1959 kwaphawula Inkomba L230. Isisekelo imoto entsha kwaba inguqulo yase-Amazon, okuyinto lathathwa amandla iyunithi - injini kaphethiloli kuyinto B16 umthamo 1.6 amalitha. amamodeli okuqala ukukhiqizwa nefomethi Ukucaciswa ezilandelayo:
Sakaza yensimbi motor ne amandla 65 ihhashi.
Bridges "Volvo-Laplander" waba unomphela phambili isondo futhi bakhulise-wheel drive kungenziwa ucishiwe.
Ekuqaleni, igama imoto ethintekayo linjengezwi Volvo Valp - «puppy ukudayiswa". Bayalithakasela Isasasa Esinalo Suv yabonisa amabutho Norway futhi uthi angomakhelwane. Futhi kule 60s omhlophe "Lapps" ivela emalini isevisi eNhlangano yeziZwe. Imoto kwadingeka ukulungiswa eziningana: i anti-imodeli, inguqulo yezokwelapha futhi imoto. Imoto ezishisa kakhulu "Volvo S303" esigabeni sayo yaqala ukuvela ekuqaleni '70.
Uphawu lokhu engibaziyo steel gantry amabhuloho, okuyinto eyamenza eyaziwa ngokuthi okungcono wonke amasondo imoto efana nayo. Ohlukile "Laplandera" itholakala engafezeka yangempela. Wagon imishini nge onensika isitebhisi Uhlaka umelana ezimazombe kanye kwazanywa ngokokuqala enama-asi portal wokuqala nge izikhonkwane eziyisishiyagalombili ezivumelekile umncintiswano ngqo auto-German Unimog.
Oshayelayo "Volvo-Laplandera" anganciphisa ukusebenza ngesivinini, Dynamics, kudingeka ulawule ukulungiswa. Kodwa ibanga phakathi ama-eksisi umusi main namasondo kubalulekile elingeza ngamasentimitha ambalwa zomhlabathi imvume. Ngenxa displacement we-eksisi isihlobo komunye nomunye futhi yokubakhona drive lokugcina ngokuphawulekayo anda weJiyomethri imingcele patency. amabhuloho Sami portal kusungulwe umklami German Fridrihom Albertom futhi bazilungiselela nozakwabo unjiniyela Oise G. K. Mirzoevym. Noma kunjalo, iyihlanganise ne "Laplanderom". Clearance imoto kuyinto 38 cm (ikota aminingi ukudlula UAZ lempi). Overhangs angekho, kukhona womoya interaxle yokuvala.
Okulandelayo main nemingcele lobuchwepheshe kanye jikelele imoto Volvo Laplander.
uhlobo umzimba - emithathu umnyango Suv.
Ubude / ububanzi / ukuphakama (m) - 5.35 / 1.9 / 2.45.
Track phambili / emuva (m) - 1.54 / 1.54.
Ground imvume (cm) - 38.
"Volvo Laplander," izici lobuchwepheshe kwelinye lamagumbi injini has okulandelayo:
Uhlobo powerplant - uphethiloli injini nge carburetor.
Umthamo (cc.) - 2980.
Amandla (hp ..) - ku-117 linemibhikisho ngayinye anamane amawaka.
Inombolo amasilinda - 6.
Ubude piston unhlangothi (cm) - 8.
Gear ushintsho ibhokisi ngokucabangela mechanical uhlobo imoto has izigaba ezine. Four-wheel drive wonke amasondo imoto in running ukala 2.8 amathani, lapho esiphezulu isisindo 4.4 m. I eziqondisa ilula ikamu isikulufa indlela futhi iziyisikhombisa eziningana adlulisa ukunyakaza amasondo. -Drive hydraulics kanye sigubhu pads yisisekelo oluthembekayo ukubopha inhlangano. "Hammer" - inguqulo mechanical, ukumiswa ifakwe izakhi ukushaqeka-iyavuleka telescopic.
Nge esizukulwaneni ngasinye Volvo ATV wawuya ngokuya usinda nonamandla. Ngesikhathi ukukhululwa esetshenziswa wheelbases eziningana. Kwakukhona ngisho ukushintshashintsha 8x8 (L4230). Imoto weza nzima, ngaphandle kwalokho wekhono futhi izakhiwo passable. Ukukhiqizwa serial imoto ngeke uhambe. I ethembisayo futhi ethandwa bebelokhu SUV nge 4x4 base 6x6.
In parallel ukukhiqizwa lokhu model waqala ekuthuthukiseni izinga wonke amasondo izimoto. Ukulungiswa ushintshiwe ngokuvumelana nezimfuneko kanye nezidingo amayunithi ezithile lempi. Kube inguqulo ejwayelekile imikhondo (imodeli 206-I), imoto compact maneuverability ngcono phezu kwamanzi, umgibeli yokwahluka ephethe namandla okuhle ukuthuthwa izisebenzi.
Ozakwethu kanye izimbangi
Bezakhiwe Uhlaka kudvweba nekwakhiwa elintantayo ukumiswa izakhiwo unike amandla "Volvo-Laplanderu" okunqoba izithiyo ezinzima kwamandla. Kuyaphawuleka ukuthi ukwakhiwa kwanoma yiliphi IsiSwidi Suv kwenziwa kuphrojekthi olulodwa ngaphansi kwegama "4140". umklami Chief waqokwa Niels Hartelius, okuyinto ngaphezu kwale nguqulo, ithuthukiswe okunethezeka Suv nemoto Volvo Sugga ngokuthi "ingulube."
Ukuthembeka, ukuzinza nokulwa umoya "Laplandera" baziswa eNorway, Latvia, Saudi Arabia, Netherlands neMalaysia. Kula mazwe, njengasezulwini nabanye abaningi, imoto kuthengwa hhayi kuphela impi kodwa futhi ukusetshenziswa elinokuthula. 1983 Kwakungesinye inkomba ezingeni lelisetulu imoto lapho Suv iwine rally "Paris-Dakar" phakathi izimoto ethwele izimpahla ezingamathani angu-10.
"Laplander" ezikhathini zanamuhla
Car "Volvo Laplander," zingatholakala eYurophu namuhla. Kuyinto efanelekayo ibutho ukuze afeze imisebenzi, kanye funa kusukela abazingeli, abahambi ishiywe izindawo, wenza ezihlukahlukene imisebenzi izinjongo zokuthula. abathandi Domestic izimoto Retro ngokuvamile babe in izimoto zabo umndeni "isinkwa", kodwa ambalwa kakhulu kubo ongafuni ukuthi lushintshe lube edume eLapland lihamba.
Thenga le imoto ngisho simple. Izindleko eside, zangezifiso kanye nokuntuleka izimo play kulo magazini indima ebalulekile. Abanye abalandeli wathenga izingxenye yokuqala engibaziyo lempi. Ngenxa yalokho, ungase ukwazi ukuhlangabezana amalungiselelo eminye ezithakazelisayo ukuthi sihlanganise amabhuloho nezinye izakhi UAZ futhi "Laplandera".
Ngenxa yalokho, Volvo Laplander Ukubuyekeza imoto ingase Waphawula ukuthi ekuqaleni kuka-50-yalolucwaningo kwekhulu elidlule, ekupheleni kwempi ye ka-1939-1945, kwenziwa yokusiza umuntu ukuba aphefumule imfundiso lempi futhi sifinyelele eziphethweni ezifanele. Army emhlabeni okuhleliwe izinselele lobuchwepheshe ukuklanywa ukukhiqizwa wezempi omusha off-road izimoto. ukukhathazeka "Volvo" onjiniyela abhekana ngayo umsebenzi ngokuthi "omuhle kakhulu".
Ngaphambi esikhundleni Hammer kuwo wonke amalungu NATO lawa abehlome ngezibhamu SUV zabo, iningi lazo ongeke ukwazi ohlukaniswa ukusebenza phezulu-mgwaqo. Volvo wakwazi ukwenza omunye abameleli engcono yale ekilasini, ezifana S303 kanye ukuhlela kabusha yayo. Lokhu imoto bekulokhu ethandwa emazweni amaningi. Ngisho kwamanje, imoto isetshenziswa ngetinhloso letehlukene, edinga ukuzibandakanya ezokuthutha enamandla futhi enokwethenjelwa, engesiyo imigwaqo esibi nezinye izithiyo.
Agricultural University (Volgograd): neminyango kanye nokubuyekeza